October 2016 – Ministry of Education in Puntland
Daawo Sawiraddii Kormeerkii agaasimaha guud ee uu ku tagay iskuulada boosaso.
31/ 10/2016 -Agaasimaha guud ee wasaaradda Waxbarashada iyo Taclinta sare ee dowlada Puntland ayaa si habsimi socod leh ku maraya iskuulada ku yaal magalada boosaso. Daawo sawiradii iskuuulada degmada […]
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda waxabarashada iyo Tacliinta sare oo kormeer ku sameyey iskuulada Boosaso maalintii 6aad.
q31/ 10/2016- Agaasimaha guud ee wasaaradda Waxbarashada iyo Taclinta sare ee dowlada Puntland ayaa si habsimi socod leh ku maraya iskuulada ku yaal magalada boosaso. Ujeedada kormeerka agaasimaha guud ayaa […]
Wasiirka Wasaaradda Waxabarashada iyo Tacliinta sare iyo Agaasimaha guud oo safar shaqo u tagay Degmada Carmo, ufayn, iyo isku shuban ee Gobolka bari.
28/10/2016 Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sarre Dowladda Puntland Dr. Abshir Yuusuf Ciise iyo agaasimaha guud awafdi uu hogaaminayo oo kormeer Waxbarasho ku maraya Gobolada Puntland ayaa lagu soo dhaweeyay degmooyinka […]
Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare oo kormeer ku Tagatay Nugaal, Karkaar, Bari.
27/10/2016Wafdi balaaran oo u hogaaminayo wasiirka wasaarada waxbarashada tacliinta sare ee puntland iyo Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada aya safarao kormeer kumaraya deeganada puntland gar ahaan gobolka nugaal karkaar, bari […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo Magalada buur-salax ka hergalisay Boarding kobcinta Waxbarashada gabdha ah.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo sagootisay 130 arday oo deeq Waxbarasho ka heshay dalka Eithopia
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo dhagax dhigatay Dugsi sare cusub ee Magalada Garowe.